रक्त समूह नै वर्ण व्यवथा– सबै रगत समान भए ‘ए’लाई ‘बी’ समूहको रगत किन दिइदैन ? - Nepal Japan
नेपाली समय : 03:07:55
जापानी समय : 06:22:55
रक्त समूह नै वर्ण व्यवथा– सबै रगत समान भए ‘ए’लाई ‘बी’ समूहको रगत किन दिइदैन ?
18 June, 2019 11:14 |बिचार | comments | 29250 Views
– वेदराज पन्त –
आयुर्वेदमा ‘रक्तं जीव इति स्थिति’ भन्ने सूत्र छ । आयुर्विज्ञान अनुसार वैदिक कालमा आध्यात्मिक चिन्तकहरुले स्थापित गरेको सिद्धान्तमा वर्णविभाजन, वर्णाक्रम, रक्तशुद्धताको उल्लेख छ, यस्तो वर्गीकरणको रहस्य अनुपम छ ।
वेद–वेदाङ्ग, भागवत महापुराण, महाभारत, भगवदगीता आदि वैदिक वाङ्मय अनुसार सृष्टि संरचनामा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शुद्र र अन्त्य गरी पाँच श्रेणीमा वर्णविभाजन भयो । वर्णसंकरको थप चर्चा गर्दै यसले मानवीय गुणवत्ता क्षय हुने आशंका गरियो । यसबारे अनेक तर्क–वितर्क, कुतर्क गर्नेहरु छन् । यथास्थान यसबारे यथामति चर्चा हुँदैआएको छ । यही ‘रक्तं जीव इति स्थिति’को सूत्रबाट प्राच्यको विचार जस्तै आधुनिक विज्ञानले पनि रक्तधमनीमा प्रवाहित हुने ऊर्जा (वैज्ञानिक भाषामा क्रोमोसोम)लाई महत्व दिन्छ । खप्तड बाबाको कृतिबाट हुवहु सार्दा यस्तो शब्दचित्र पाइन्छ–
“शरीर विज्ञान अनुसार कोशको जुन व्याख्या गरिन्छ त्यसबाट अत्यन्त सूक्ष्म सचेतन र सक्रिय अणु छ भन्ने ज्ञान हुन्छ । यस्ता अणुहरु विभिन्न आकारका हुन्छन् । कोही अत्यन्त सूक्ष्म छन्, जुन माइक्रोस्कोपबिना देख्न सकिंदैन, कोही केही ठुला हुन्छनु जसलाई तेजदृष्टि भएका व्यक्तिले देख्न पनि सक्दछ । यसको वनावटमा बाहिरपट्टि एक चम्किलो झिल्ली हुन्छ । भित्रपट्टि एक लसादार सोमा (रस) हुन्छ जसलाई ‘प्रोटोप्लाजम’ भनिन्छ र संस्कृतमा ‘प्रथम प्रसोम’ भन्दछन् । यस प्रोटोप्लाजमको भित्र एक सूक्ष्मतम् अणु हुन्छ जसलाई अंग्रेजीमा Nucleus र संस्कृतमा ‘कोशेस’ भन्दछन् । जीवकोश पनि यसैलाई भन्दछन् ।
वास्तवमा यही कोशेस मूलभूत कोशको चेतना शक्ति केन्द्र हो, यही हरेक कोशको आत्मा हो, हरेक कोशको जीवन यसैमा निर्भर गर्दछ । यदि यो कोशलाई पनि माइक्रोस्कोपद्वारा हेर्ने हो भने यसको रचनामा पनि कपासको रेशाको जस्तो जाल देखिन्छ । यी सूक्ष्म रेशाहरु हरेक रंगलाई ग्रहण गर्न सक्दछन्, यसैले यसलाई क्रोमोसोम भनिन्छ र तन्त्रयोगमा यसको नाम वर्णस्यूम भन्ने मिल्दछ । यी तिनै रेशाहरु हुन् जो परम्परागत वंशवृक्षमा वीजरुपले माता पिताद्वारा सन्तानको साथ आउँछन् । यो त्यही तात्विक सत्ता हो जसद्वारा प्रत्येक सन्तान आफ्नो मातापिताको वास्तविक धर्मसम्भव सन्तान भएको अधिकार पाएर उत्ताराधिकारी बन्दछ । वर्णव्यवस्थाको स्थापना पनि यही वर्णस्यूम र लैटिन शब्द क्रोमोसोम एकै अर्थ राख्दछन् ।
शरीर विज्ञान अनुसार पनि एक प्राणीको कोशको कोशेसमा वर्णस्यूम रेसाहरु एक खास संख्यामा सदा स्थायीरुपले अपरिवर्तनशील रहेको पाइन्छ । यो वर्णस्यूम रेशाको वनावट चार प्रकारका छन् । यो क्रोमोसोम पत्ता लगाउने जर्मन डाक्टरलाई अन्तर्राष्ट्रिय नोबोल पुरस्कार प्राप्त भएको थियो । ती डाक्टरको दावी छ कि– क्रोमोसोमको वनावट चार प्रकारभन्दा बढी वा कम भएको सिद्ध गर्नसक्नेलाई उनी आफ्नो नोबोल पुरस्कार दिन तयार छन् । आजसम्म कसैले सिद्ध गर्न सकेका छैनन् । आजभोलि शरीर विज्ञानले जीनसमा क्रोमोसोमको अनेक उपभेद पत्ता लगाएका छन् । ती मौलिक भेद होइनन् । ती वर्णसंकर रुप उपभेद हुन जसलाई वैज्ञानिक भाषामा Hel mixture पनि भन्न सकिन्छ । विशेष ध्यान दिनयोग्य कुरा यो छ कि मनुष्यको रक्त पनि चार किसिमका छन् । रक्तको यो चार प्रकारको गुण र स्वभाव पनि भिन्नभिन्न छन् । यही वर्णस्यूम रेसाद्वारा नै पैतृक गुण, कर्म, स्वभाव सन्तानमा आउँछन् ।
यसबाट यही सिद्ध हुन्छ कि वर्ण व्यवस्था यही वर्णस्यूमको आधारमा एक परम सत्य वैज्ञानिक आधारबाट भएको छ । गोत्र तथा प्रवरको रहस्य पनि यही वर्णस्यूम रेसामा अन्तरनिहित छ । अतः अर्काको कुरा विनाविचार स्वीकार गर्नु राम्रो होइन । हिन्दु धर्मलाई सम्झने कोशिस गर्नुपर्छ । त्यसबखत हिन्दु धर्ममा एक विन्दु पनि कुसंस्कार छैन भन्ने थाहा हुन्छ । हिन्दुधर्म गम्भीर आध्यात्मिक विज्ञानसम्मत एवं दार्शनिकताले परिपूर्ण छ । यसकारण आर्य ऋषिहरुको कुरामा विश्वास गरी आफ्नो अधिकार अनुसार धर्म कार्य गर्नु परम कर्तव्य हो ।”
विश्वयुद्ध समाप्तिपछि यो प्रयोगमा थप अनुसन्धान गरियो । अन्य शरीरबाट दिएको रक्त प्रदान गर्नेबारे अनेकौं यान्त्रिक प्रयोग भए । रक्तस्राव नै मृत्युको कारण हो भने नयाँ रक्त दिएर पनि अधिकांश व्यक्ति किन मर्छन् ? योबारे गहन खोज वैज्ञानिकहरुले गरे । जर्मन वैज्ञानिक अव्राहमले स्थापित गरेको सिद्धान्तले आयुर्वेदको विशुद्ध रक्तका पाँच विशेषतायुक्त श्रेणीको पुष्टि भयो । समान विशेषताको रक्तकीट एक अर्को शरीरमा मिलेर सहयोगपूर्वक जीवनप्रवाहलाई निरन्तरता दिन्छन् । असमान श्रेणीका फरक विशेषताको रक्तकीट एक अर्काका निमित्त प्रतिकूल हुने हुँदा नवीन रक्तले शरीरलाई स्वस्थ पार्नुको सट्टा रक्त नै विषाक्त भएर तत्काल मृत्यु भएको प्रमाणित भयो । यसले पुष्टि गर्छ– सबै मानिसको रगत देख्दा रातै भए पनि गुणवत्ताको दृष्टिले विशिष्ठ र निकृष्ट हुन्छ ।
‘वर्णव्यवस्था’मा ब्राह्मणादिको वर्णव्यवस्थाले रंगको यही विशेषतामा रक्तमा कीटको अवस्था तय गरेको मानिन्छ । वैदिक शास्त्रमा वर्णित यस्तो रंग रहस्यको उपहास गर्नेलाई पाश्चात्य नवीन भनिने विज्ञानले पनि सबै मानिसमा एकैनासको रंग र रक्तकीट हुँदैन । रक्तकण र रंग तथा कीट फरक फरक हुन्छ भन्यो । त्यसै अनुसार रक्तपरीक्षण गरेर समान किसिमको रक्त अस्वस्थ मदरुलाई स्वस्थ बनाउन दिने पद्धति विकसित भयो । छालामा कालो गोरो देखिएला तर रक्तधमनीमा प्रवाह हुने रक्तकीट र रक्तप्रकार फरक फरक नै हुन्छ । यत्रतत्र हुने गुप्त व्यभिचार र खुला रुपमा भरहेका अन्तरजातीय, अन्तरदेशीय वैवाहिक सम्बन्धबाट विशुद्ध रक्त परम्परा, दूषित हुन गएको भए अर्कै कुरा । अन्यथा वर्ण व्यवस्था अनुसार रक्त,धमनीमा सोही अनुसार रंग र रक्तकीट हुन्छन् भन्ने प्राच्य अवधारणा अकाटुय छ ।
त्यसैले याज्ञवल्क्य स्मृतिमा शास्त्र सिद्धान्तको सूत्र छ– “सवर्णेभ्यः सवर्णासु जायते हि सजातय” भावार्थ– समान वर्णको पुरुष, समान वर्गकी नारी (स्त्री)बाट समुत्पन्न सन्तान नै सजाति हुन् । आधुनिक–भौतिक विज्ञानले पनि यसलाई पुर्णतया नकार्न सक्दैन । अंग्रेज हुन् वा जर्मन, फ्रेन्च हुन् कि अन्य आफ्नै रक्तरंग र वर्णको गौरबगान गर्छन् । यद्यपि पाश्चात्य जगतमा यौन समागमको स्वतन्त्रताको प्रतीक यौनक्रियालाई शारीरिक भोक र इन्द्रिय तृप्तिकै निमित्त प्रयोग गरिन्छ । विभिन्न श्रेणीका परस्पर भिन्न रक्त समिश्रणको परिणामले जीवन प्रवाहमा विघटन नै निम्त्याइरहेछ । सम्बन्ध बिच्छेदका कारण दृश्यमा अनेक होलान् । तर सूक्ष्म तरंगमा रक्त अशुद्धताकै परिणाम मानसिक द्वन्द्व, तनाव र वैमनस्य प्रमुख कारण हो ।
भौतिक विकासको चरम शिखर छोएको पश्चिमी जगतको जीवनशैली संयुक्त परिवारमा रमाउँदैन । आध्यात्मिक शक्तिका लागि भौतारिएको छ । त्यहाँ आध्यात्मिक शान्ति छैन । वर्ण संकरकै कारण यस्तो अवस्था आएको हो । यसरी नै प्रकृतिका अन्य स्थावरजंगम, वनस्पति, वृक्षादिको साथै देवता, दैत्य र उद्भिज सबैको वर्ण व्यवस्था वैदिक वाङ्मयमा सविस्तार उल्लेख छ । संक्षेपमा यसबारे यहाँ केही चर्चा गरिन्छ ।
पहिले ब्राह्मणवर्गको उत्पत्ति सनतकुमारादिबाट सुरु भयो । उनीहरुबाट सृष्टि अगाडि बढ्न सकेन । प्रजापतिले क्षत्रियवर्ग उत्पन्न गरे । यो वर्णका इन्द्र, बरुण, रुद्र आदि क्षत्रिय देवता हुन् । यिनीहरुबाट सृृष्टिले निरन्तरता पाउन सम्भव भएन । त्यसपछि सृष्टिमा आएका हुन् वैश्यवर्णका वसु, रुद्र आदि । यिनले पनि सृष्टिलाई अगाडि बढाउन सकेनन् । शुद्रको उत्पत्ति भयो । शुद्रवर्णमा परे पूषादि देवता । यी चतुर्वणमा पर्छन् । यी सबैको उत्पत्ति अमैथुनी सृष्टि हो । यस्तो सृष्टिलाई निरन्तरता दिने उपायका रुपमा मैथुनी सृष्टिको प्रारम्भ भए तापनि सृष्टि संरचनामा अमैथुनी सृष्टिबोध गराउने शब्द ब्रह्मको यथास्थान छ ।
त्यसैले शब्दलाई नै ब्रह्म भनिन्छ । “ॐकार मात्रम सचराचरं जगत” सृष्टिलाई निरन्तरता दिन अन्य योनि र वनस्पतिको असंख्य उत्पत्ति भयो । यो पराप्रकृतिले व्यवस्थित गरेको जगतमा अनुकूल वातावरण बनाइराख्ने एक अर्काको बीचको सम्बन्ध अनुपम मानिन्छ । मनुष्य नभएको ठाउँ त्यो जल होस् वा स्थल, नभ नै किन नहोस् । जलचर, नभचर, स्थलचर सृष्टिचक्र घुमिरहन्छ । मानिस नभएर सृष्टि रोकिन्न । अमैथुनी सृष्टिभन्दा मैथुनी सृष्टिको उपादेयतामा जोड दिंदै विपरीत लिंगीमा परस्पर आकर्षण र उत्तेजना नरनारीका यौवनकालमा देखापरे ।
तामसीको उन्माद दशाको बेलिविस्तार लगाउन जरुरी छैन । यो पागलपनको द्योतक हो । बलात्कार, यौनहिंसा विविध अपराधिक क्रियाकलाप यसका उपविज्य कर्म हुन् ।
यसरी नै सात्विक नरनारी स्वल्प मैथुनसेवी हुन्छन् ।
राजसीक विचारवान हुन्छन् । मैथुनका निमित्त शयनकक्ष नै सजिसजाउ पार्छन् ।
तामसीक अविचारी, अविवेकी, हिंस्रक हुन्छन् ।